Oovimba bakaGoogle-Ilungelo laseMelika lokwazi
Ukunyuka kwabaNtu abaTyhini abaSetyhini, amaQela ezeMpilo kuLuntu
ezaposwa ngomhla Novemba 30, 2017 by UStacy Malkan
Ifoto © Tony Powell. I-2017 yeQonga labaSetyhini elizimeleyo iGala. Isikhululo soManyano. NgoNovemba 15, 2017
Eli nqaku liqale lavela IHotff Post.
Kwi-soiree yamva nje e-Union Station, i-DC yamandla ombutho ehlanganisene kwindibano yezempilo echasene noluntu enxibe njengombhiyozo wabasetyhini ekufuneka ukhathalele nabani na okhathalele impilo namalungelo abasetyhini nabantwana.
IQonga laBasetyhini abaMeleyo laveza uluhlu olunomtsalane Abapolitiki baseRiphabhlikhi kwimidlalo yayo yonyaka kuxhasiwe, phakathi kwezinye, iBhunga laseMelika leKhemistry, inkampani yecuba uPhillip Morris, iqela lezorhwebo kushishino lwezithambiso, uGoogle kunye nephiko lasekunene leBhunga laseMelika loTshintshiselwano loMthetho.
Izithethi zibandakanya uSomlomo weNdlu uPaul Ryan kunye nomcebisi kaTrump uKellyanne Conway, ophumelele i-IWF Ixabiso leBhaso ngokuba "ngummeli onenzondelelo kurhulumente osikelwe umda" ongayamkeliyo "imbono yokuba ukuba ngumfazi sisiphene." IConway ikwalilungu lebhodi ye-IWF.
Ke ithini iForam yaBasetyhini yaBazimeleyo?
IWF yaqala kwiminyaka engama-25 eyadlulayo njenge umzamo wokuzikhusela Ngoku-iNkundla ePhakamileyo yezoBulungisa uClarence Thomas njengoko wayejamelene nezityholo zeSexual Harassment. Iqela lisukela iqokelele izigidi ukusuka kwiziseko eziyimfihlakalo zabazalwana bakaKoch nabanye oonozigidigidi abanamalungelo ukuze bafeze injongo yabo "yokwandisa inani labasetyhini abaxabisa iimarike zasimahla nenkululeko yabo."
Kwilizwe le-IWF-iqela uJoan Walsh elichazwe kulo Wesizwe "njengabafazi 'abenza umsebenzi ongcolileyo kaKoch" - oko kuthetha ukukhusela inkululeko yemibutho yokuthengisa iimveliso ezinetyhefu kunye nokungcolisa okusingqongileyo, ngelixa izama ukuyila loo ajenda njengefanelekileyo kubafazi nasebantwaneni.
I-e-cigarettes kufuneka yamkelwe ngenxa ye- iimfuno ezizodwa zebhayoloji yabasetyhini, umzekelo, kunye nemfundo yesayensi yemozulu yoyikisa kakhulu zabafundi. (Ileta ye-e-cig ngu "Phillip Morris PR oqhelekileyo," uthi Ingcali kumzi mveliso wecuba uStan Glanz; kunye noGreenpeace ihlelwa IWF njenge "Koch Industries Imozulu yokuphika imozulu yeqela eliphambili.")
Abasetyhini banokuxhamla ngokungahoyi inkxalabo "ye-alarmist" malunga neekhemikhali eziyityhefu, ngokutsho kuthotho lwezifundo ze-IWF ixhaswe nguMonsanto.
Ukukunika uluvo lokuthumela imiyalezo kwiikhemikhali: Oomama abanyanzelisa ukutya okune-organic banekratshi, baqhankqalaza "abazali behelikopta" abafuna "ukulawula yonke into xa kufikwa ebantwaneni babo, nokuba ukutya kulinywa kwaye kuphathwa njani, ”NgokukaJulie Gunlock, umlawuli weprojekthi ye-IWF ye“ Culture of Alarmism ”, njengoko kucatshulwe kwi inqaku osihloko sithi "Ubuzwilakhe be-organic mommy mafia" eyabhalwa ngumntu we-IWF.
Kwi-gala ye-IWF, uGunlock wenza umfanekiso op kunye nomsebenzi waseMonsanto u-Aimee Hood noJulie Kelly, obhala amanqaku ebeka ukungathandabuzeki kwinzululwazi yemozulu kunye nomngcipheko wokubulala izitshabalalisi, kunye kanye wabizwa iqhawe lemozulu uBill McKibben "iqhekeza lekaka."
UGunlock noKelly “baziinkwenkwezi” I-Hood ithunyelwe nge-tweet.
"Ndiyayila le nto," Umsebenzi waseMonsanto uCami Ryan ubuyisele umyalezo nge-titter.
Beka isakhelo ujikeleze i-shindig yonke kwaye ubone ukungabinangqondo kwezopolitiko ezithathiweyo eMelika, apho iinkokheli zomgaqo-nkqubo zivuma elubala iqela labasetyhini elichasene nabasetyhini elilingana "nenkululeko" ngokutya i-pesticides, kwisiganeko esixhaswe ngumzi mveliso weekhemikhali. , inkampani yecuba, iqela elineembono ezibaxiweyo ezifuna ukuphelisa iNdlu yeeNgwevu ekhethwe njengomvoti kunye nomthombo weendaba onempembelelo emhlabeni.
Ngeli xesha kwihlabathi elinengqiqo
Inzululwazi yamva nje icebisa ukuba ukuba ufuna ukukhulelwa kwaye ukhulise abantwana abasempilweni, kufanelekile ukwala ubuxoki bokuba amaqela afana neQonga laBasetyhini abaZimeleyo azama ukuthengisa.
Kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo, iiJenali zeAmerican Medical Association zipapashe iphepha le- Isifundo seHarvard okubandakanya ukutya okunyangiweyo kwizinambuzane kwiingxaki zokuchuma, a Ucwaningo lwe-UC San Diego ukurekhoda ukunyuka okukhulu kokubhencwa komntu kwisibulali zinambuzane esiqhelekileyo, kunye nogqirha incwadi yenkcazo ukukhuthaza abantu ukuba batye ukutya okune-organic.
Ndibhale malunga nezi zifundo ngokweenkcukacha apha, "Uzama ukukhulelwa? Inzululwazi iphakamisa ukuba: yitya i-organic kwaye ulawule ishishini lokubulala izitshabalalisi".
Amaqela aphambili ebenikezela ngengcebiso efanayo iminyaka.
Ngo-2012, iAmerican Academy of Pediatrics cetyiswa Ukunciphisa ukubonakaliswa kwabantwana kwizibulali zinambuzane ngenxa ye uncwadi olukhulayo edibanisa izibulali zinambuzane neengxaki zempilo ezingapheliyo ebantwaneni, kubandakanya iingxaki zokuziphatha, iziphene zokuzalwa, isifuba kunye nomhlaza.
Ngo-2009, bipartisan Iphaneli kaMongameli yePhaneli yathi: “umthwalo wokwenene womhlaza obangelwe kukusingqongileyo uye wajongelwa phantsi.”
Iphaneli yacela uMongameli welo xesha uGeorge W. Bush ukuba "asebenzise amandla e-ofisini yakho ukususa i-carcinogens kunye nezinye iityhefu ekutyeni kwethu, emanzini nasemoyeni ezonyusa ngokungeyomfuneko iindleko zokhathalelo lwempilo, zikhubaza imveliso yeSizwe, kwaye zonakalise i-America uyaphila. ”
Ngelishwa kwisizwe sethu, ukwenza ngokuvisisana naloo ngcebiso akukwazanga ukuba kwenzeke kwinkqubo yezopolitiko engeniswe kwimidla yomdibaniso.
Ukubanjwa kwezempilo kunye nesayensi
Kumashumi eminyaka, imibutho yokubulala izitshabalalisi isebenzise isayensi kunye neearhente zolawulo zase-US ukugcina inyaniso ifihlakele malunga neengozi zempilo zeekhemikhali zabo.
Iinkcukacha zityhilwa ngamakhulu amawaka amaphepha e amaxwebhu oshishinowakhululwa zomthetho Ukufumanisa, ba bhenela kwaye Izicelo zeFOIA ezithe zavavanywa Ukumanyelwa kukarhulumente kwaye by ezininzi eendaba ezithengisa.
Isishwankathelo seMonsanto "sephulo elifihlakeleyo lokuqhuba irekhodi lezenzululwazi, ukuhambisa uluvo loluntu, kunye nokuchaphazela uvavanyo lolawulo" kwi-herbicide glyphosate, jonga esi sincoko nogxa wam uCarey Gillam Iphephancwadi i-Undark.
Njengomzekelo omnye wobumbano lukarhulumente / lwenkampani: kwi-2015, kwiwotshi yolawulo luka-Obama, igosa le-EPA eliphethe ukuvavanya umngcipheko womhlaza we-glyphosate ekuthiwa waqhayisa kwisigqeba seMonsanto malunga nokunceda "ukubulala" isifundo somhlaza se-arhente, njenge IBroomberg yabika.
Ukucinezelwa kwesayensi ibe yiprojekthi ye-bipartisan, yamashumi eminyaka. Ukusukela nge1973, iMonsanto ibonise inzululwazi ethandabuzekayo ukubanga ukhuseleko lwe-glyphosate ngelixa i-EPA ibijonge kwelinye icala, njengoko uValerie Brown kunye no-Elizabeth Grossman babhalela Ngale maxesha.
UBrown kunye noGrossman bachitha iminyaka emibini bevavanya indawo yokugcina esidlangalaleni yamaxwebhu e-EPA kwi-glyphosate, kwaye baxela:
“IGlyphosate lityala elicacileyo 'lokuthimba umthetho' ngumbutho owenza into yawo ngokwasezimalini ngelixa imibuzo enzima malunga nempilo yoluntu ihlala iseluswini. Ingxelo icebisa ukuba kwiminyaka engama-44 — ngolawulo luka-Mongameli osibhozo- ulawulo lwe-EPA aluzange luzame ukulungisa ingxaki. Ewe, ishishini lezibulala-zinambuzane lichukumisa ubuchwephesha balo obujonge phambili, bale mihla njengoko izama ukugcina uphando lwayo egumbini, kwaye ixhomekeke kwiingqikelelo ezithandabuzekayo nakwiindlela eziphelelwe lixesha kwityhefu yolawulo. ”
Ukuphela kwendlela yokuseka isiseko sesayensi sokuvavanya ukhuseleko lwe-glyphosate, babhala, kukunyanzela ukukhanya kwemini phakathi kwabalawuli nabalawulwa.
Umda osikelwe umda uthetha inkululeko yokwenzakalisa
E-Washington's Washington, akukho kukhanya kwemini konke konke phakathi kweenkampani ezithengisa iimveliso ezinobungozi kunye neearhente ezimele ukuzilawula.
Umlawuli we-EPA uScott Pruitt ngu ukutyhala izazinzulu kwiibhodi zeengcebiso kunye nokugcwala kwe-EPA nge Abonyulwa ngokwezopolitiko iqhagamshelwe kumzi mveliso weoyile, wamalahle kunye neekhemikhali, uninzi lwazo oludibene nabakhanyela inzululwazi yemozulu.
Njengomnye wakhe amanyathelo okuqala asemthethweni, U-Pruitt waphosa bucala ingcebiso zezazinzulu ze-EPA kwaye wavumela iDow Chemical ukuba iqhubeke nokuthengisa isibulali zinambuzane esenziwe njengegesi yemithambo enxulunyaniswa nomonakalo wobuchopho ebantwaneni.
"Elona lifa lihlala lihleli likaTrump isenokuba ngumhlaza, ukungachumi kunye nokuncipha kwe-IQs kumashumi eminyaka ezayo."
"Abantwana baxelelwa ukuba batye iziqhamo kunye nemifuno, kodwa izazinzulu ze-EPA zifumene amanqanaba ale iyeza lokubulala izinambuzane ekutyeni okunjalo ukuya kumaxesha angama-140 umda obonwa ukhuselekile," kubhala uNicholas Kristof. I-NYT ivuliwe. "Elona lifa lihlala lihleli likaTrump isenokuba ngumhlaza, ukungachumi kunye nokuncipha kwe-IQs kumashumi eminyaka ezayo."
I-Pruitt ihambile ukuza kuthi ga ngoku ukubeka umzi mveliso weekhemikhali uphethe i umthetho omtsha we-toxics owawufanele ulawule imboni yeekhemikhali.
Yonke inomsindo kakhulu-kodwa emva koko, ibilixesha elide kakhulu.
Umthetho omtsha we-toxics, ophumelele kunyaka ophelileyo kwi isichotho sobuqaqawuli bipartisan, bekunjalo ichaswe ngu amaqela amaninzi okusingqongileyo kodwa kuzukiswa ngu -Kwaye kwathiwa ibhalwe ngu -Bhunga laseMelika laseKhemistry.
Umzi mveliso weekhemikhali ozizigidi ezingama-800 zeerandi ubeka imali koosopolitiki nasekuphembeleleni indlela yokuphuma kummiselo osebenzayo. Oku bekusoloko kuyingxaki, kodwa ngoku ulawulo lukaTrump luye lwahamba laza lakhetha abantu abasebenza kwimichiza yokongamela ukhuselo lokusingqongileyo, ”watsho uKristof.
“IAmerican Academy of Pediatrics yasikhalazela isigqibo sabaphathi malunga neyeza lezibulala-ntsholongwane legesi, kodwa amagosa azimanya neli shishini ngoogqirha. Umgxobhozo uphumelele. Indawo yokwamkelwa kweemveliso zamachiza, iAmerican Chemistry Council, luguqulelo lwanamhlanje lweCuba Elikhulu… ”
"Ngenye imini siza kujonga ngasemva sizibuze: Besicinga ntoni ?!"
Umlinganiswa welizwe lethu
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, iQumrhu laManina aLuzimeleyo lenze iBhaso lawo lobuGcisa kuNancy Brinker, umseki weSusan G. Komen yezonyango, umbutho omkhulu wesizwe onomhlaza wamabele- iqela elithe lagxeka ngokuthatha imali Imibutho engcolisayo kunye nokukhuthaza ukutya okungenampilo kwaye iimveliso eziyityhefu.
Kwi-2007 IWF gala, kwintetho yokwamkela wabiza "Umlinganiswa welizwe lethu, ”U-Brinker walumkisa ngelokuba izigidi zabantu zizokulahleka ngaphandle kokuba iMelika ithathe amanyathelo ukunqanda" umhlaza tsunami "ozayo.
Kodwa emva koko, wathi: “Zihlobo zam, ayiyongxaki le yezopolitiko. Xa kuziwa kumhlaza, akukho bantu baseRiphabliki okanye abaDemokhrasi, akukho nkululeko okanye abo bagcina umthetho. ”
Endaweni yoko, utshilo, ebhenela ekungacacini kakuhle njengoko wayemi phambi kweqela elixelela abantu basetyhini ukuba bangazikhathazi ngeyeza lokubulala izitshabalalisi, kumnyhadala ongena mali yenkampani, ukubetha umhlaza yinto yokubiza umnqweno wokwenza umhlaza ube yinto ephambili kwilizwe liphela!
Kodwa leyo yingxaki yezopolitiko. Imalunga neRiphabhlikhi kunye neeDemokhrasi, bobabini abo beyekile amaMelika ngokusilela ukujongana nomzi mveliso weekhemikhali. Imalunga nokubiza ukuthanda kwezopolitiko ukufumana imichiza enxulunyaniswe nomhlaza, ukungachumi kunye nokwenzakala kwengqondo kwintengiso nakukutya kwethu.
Okwangoku, singathatha ingcebiso yesayensi: yitya i-organic kwaye uvote abezopolitiko abakulungeleyo ukumelana nomzi mveliso wokubulala izitshabalalisi.
Uphando lwethu, Pesticides IHoodime Hood, I-ALEC, I-American Chemistry Council, Ibhunga lezoMthetho laseMelika laseMelika, UBill McKibben, UCami Ryan, mozulu, IDow Chemical, Uphando, IQonga laBasetyhini abaMeleyo, IMF, UJulie Gunlock, UJulie Kelly, Kellyanne Conway, I-Koch, IMonsanto, UNancy Brinker, UPaul Ryan, UPhillip Morris, Scott Pruitt, USusan G. Komen weCure, ngexilongo